अखाद्य सामग्री बाढी पीडितलाई, एनजिओ देखि सरकारी उद्वार टोलीले बाँडेका राहत सामग्री गुणस्तरहिन
शिवहरीप्रसाद भट्टराई, राजविराज । बाढी पीडितलाई राहत दिने नाममा कमसल, अखाद्य र म्याद गुज्रेका सामग्री वितरण भईरहेको भन्दै सप्तरीका वाढि प्रभावित सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । एनजिओ देखि जिल्ला दैविप्रकोप
बर्षाले बित्याँसः अझै त्रास
कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज । पर्साको धोबिनीकी स्थानीय सुकैन चमैन नातीको उपचारका लागि बुधबार वीरगन्ज आउने प्रयास गरिन् तर उनी थाकिन । भाइरल ज्वरोबाट पीडित उनको नातिको उपचार अभावमा नै ज्यान जान्छ
गणेश साम्पाङ, पाँचथर । पानी पर्न शुरु हुन साथ आप्mना बन्दोबस्तिका सरसमान बोकेर बालबालिका बृद्ध बृद्धा लगायत गाउँका सबै जना सिन्दुरे डाडा तिर लाग्छन् मेमेङबासीहरु । गएको शुत्रबार आएको पहिरोमा
संसद्मा बोल्ने क्रममा सांसदहरुले प्रयोग गरेको शब्दप्रति दुईपटक आपत्ति
काठमाडौँ, ३२ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसदहरुले प्रयोग गरेको शब्दप्रति दुईपटक आपत्ति प्रकट गरिएको छ । नेकपा (एमाले)का सांसद ममता गिरीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत गरेका
शिक्षक नियुत्तिमा यस्तोे दादागिरी !
भद्रपुर (ने.स) । शिक्षक नियुत्तिको विषयलाई लिएर झापाको एक सामुदायीक विद्यालयमा विवाद बढेर गएको पाइएको छ । झापा शिवसत्ताक्षी नगरपालिका १ मा रहेको लक्ष्मीनारायण उच्च माध्यामिक विद्यालयमा लेखा विषयको शिक्षक
नेता निधिको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री अस्पतालमा
काठमाडौँ, ३२ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभएको छ । आज बिहान चावहिलस्थित ओम अस्पतालमा पुगेर उहाँले त्यहाँ
खुला दिसामुक्त बनाउने ६ करोड हावामा उडाईयो !
यमलाल भुसाल, बुटवल । रूपन्देहीलाई खुला दिसामुक्त बनाउन करिब ६ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०६८ सालदेखि सुरू भएको खुला दिसामुक्त (ओडिएफ) घोषणा अभियान जिल्लामा अझै पूरा हुन सकेको
भक्तपुरमा बाँदरको उठीबास,ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै मकैबारीमा रातभर किसानको बास
भक्तपुर, ३२ साउन । जब रात पर्छ तब चाँगुनारायण नगरपालिका– ५ छालिङस्थित त्रिशूल डाँडामा ढ्याङ्ग्राकोे आवाज सुनिन थाल्छ । त्रिशूल डाँडामा मान्छेको आवाजसँगै बज्ने ढ्याङ्ग्रोले पाहुना लाग्न त्यस क्षेत्रमा जानेका
बिद्युत उपकरण चोरेर सक्न थाले, कर्मचारी बेपत्ता !
विमल विष्ट, डोटी उचित संरक्षण तथा सम्र्बधन नगरिदा सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा रहेको समुहगाढ जलबिद्युत आयोजनामा महत्वपुर्ण समाग्रीहरु चोरी हुन थालेका छन् । २०३८ सालमा दिपायलको कुलपाते नजिक समुहगाढ खोलामा
उच्चशिक्षालाई व्यावहारिक शिक्षा अनुकूल बनाउनुपर्छः प्रम
काठमाडौँ, ३२ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रमलाई रोजगारी र उत्पादन अभिवृद्धि तथा प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यावहारिक शिक्षा अनुकूल बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको अठारौँ साधारणसभालाई आज
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल जारी
काठमाडौँ, ३२ साउन । व्यवस्थापिका– ससद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका तर्फबाट हालैको बाढी पहिरोका कारण देशका विभिन्न भागमा भएको जनधनको क्षति र समस्या समाधान गर्न सरकारबाट चालिनुपर्ने कदमका
बाढीले भारत पुर्याएका गैंँडा नेपाल ल्याउने तयारी
चितवन, ३२ साउन । बाढीले बगाएर नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा पु¥याएका दुर्लभ एकसिँगे गैँंडालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ल्याउनका लागि गृहकार्य थालिएको छ । हालसम्म पहिचान भएकामध्ये एउटा गैंडा मृत
संविधान (दोस्रो संशोधन) प्रस्ताव आज सदनमा पेश हुने
काठमाडौँ, ३२ साउन । लामो समयदेखि निकै बहस र चर्चामा रहेको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७३ आज व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरिने भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त, को कहाँ नियुक्त हेर्नुस
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले असोज २ गतेको तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा
सञ्जय कार्की, गौर, रौतहट बाढीबाट विस्थापित रौतहटको देबाही गोनाही गाविस–८ स्थित दोहारटोलमा चोरी हुन थालेको छ। बाढीबाट विस्थापित सो बस्तीका १ सय ४० घरधुरीका परिवारले वडानम्बर २ बजारटोलका छिमेकी बस्तीमा
डा. केसीद्वारा अनसन स्थगित
मुलुक प्राकृतिक विपत्तिमा परेका कारण अहिले अनशन तोड्नु परे पनि आफ्ना माग पूरा नगरिए पुनः अनशन बस्ने चेतावनी प्रशान्त वली, काठमाडौं चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशन बस्नुभएका प्राडा गोविन्द केसीले ११औं
चीनसँग तीन सझौता
टीका बन्धन, काठमाडौं छिमेकी मुलुक चीन र नेपालबीच विभिन्न विषयमा सम्झौता र समझदारी भएको छ। चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणको दोस्रो दिन मंगलबार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम
जानकी मन्दिरमा महन्त को होला ? गुठीका हाकिम रमझममा
रामकृष्ण चापागाईं काठमाडौं जानकी मन्दिरमा महन्त नियुक्ति गर्न ठूलो चलखेल शुरू भएको छ। महन्त नियुक्ति गर्ने सर्तमा गुठी संस्थानका अध्यक्ष, प्रशासक र सदस्यसहितको जम्बो टोलीलाई भारत भ्रमणमा लगिएको छ।
यस्ता पनि इमानदार! हराएको ५ लाख मिल्यो
काठमाडौं, (नेस) रन्जना गल्लीमा रहेको साथीको कार्यालयबाट पैसा लिएर टेकुतर्फ जाँदै गरेका एक युवाले खसालेको पैसा स्थानीयले फेला पारी प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि प्रहरीले हराएको व्यक्तिलाई उक्त रकम जिम्मा लगाएको
सेनामा गोली प्रहार १ को मृत्यु
पोखरा, (नेस) पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–६ वैदामस्थित रत्नमन्दिरमा सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाली सेनाका एक प्युठले अर्का प्युठलाई गोली हानी हत्या गरेको छ। कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक